Obama’s 2014 State of the Union address: Full text | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » Obama’s 2014 State of the Union address: Full text
Obama’s 2014 State of the Union address: Full text
Posted by kai on Jan 29, 2014 in Politics, Issues | 12 comments
Our alliance with Europe remains the strongest the world has ever known. From Tunisia to Burma, we’re supporting those who are willing to do the hard work of building democracy.
ဘာပဲပြောပြော… မဲဗရစ် မက်ကိန်း လာဖြဲသွားလို့…
အိုဘားမားအတွက် အကောင်းဆုံးပြယုဂ် ဖြစ်နေတာကိုးဗျ…
မက်ကိန်းက.. ဖိုက်တာလေ..။ သူ့မိန့်ခွန်းတွေမှာ.. Fight ဆိုတာမျီုးကို..အကြိမ်များများသုံးတဲ့သူ..။
ဘာမှ မဖတ်တတ်ဘူး ဗျို့
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ သမ္မတကြီးကလည်း ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက် အရက်အစား နို့သောက်ကြပါလို့ နို့သောက်ခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျ…
ဒီရွာထဲက ယမကာလုလင်အပေါင်းတို့လည်း သမ္မတကြီးရဲ့မေတ္တာ၊စေတနာတို့ကို လေးစားသောအား ဖြင့် နို့သောက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားးးးးးးးးးး….
အရက်ကနေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လောက်ဖြစ်စေ..ထွက်လာစေတယ်ဆိုတာ.. သမ္မတဦးသိန်းစိန်သိပုံမရ..။
သူက. သူရာမေရိယ အားပေးအားမြောက်လုပ်ပေးလိုက်ရင်.. ဘုန်းကြီးတွေချစ်မယ်ထင်နေပုံရတယ်..။
အင်းဂလိတ် လိုပေဘဲ …
နောက်မှ ကျိုးတွေ စားပြီး ဖတ်အုံးမယ် ဘဂျီးရေ့ … ဂေ့ ..
သတင်းစာမှာသုံးချင်လို့..။ တလ ၂-၃ခုလောက် မြန်မာလိုပြန်ရမှာပါ။
♩ ♪ ♬
တွေ့ရင်ပြောကြပါကွယ်.. ♮ ♯♭♫ . လစာပေးပါမည်..။
တလကိုသိပ်တော့မပေးနိုင်သည်။ ♩ ♪ ၂၀ဖြစ်လိမ့်မည်။ ♬ ♮ ♯♭♫
သတင်းရေး အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာဖူးလို့။
ဒါမဲ့ တာဝန်ကြီးတစ်ရပ် အနေနဲ့တော့ ရမယ်မထင်။
တစ်လ တစ်ပုဒ်လောက်ဆိုရင် အလကားပြန်ပေးအူးမှာ။
တာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ သူမျိုး ရှာပေးမယ်။